पोखराको मेयर कस्तो हुनुपर्छ ? | eAdarsha.com
पोखराको मेयर कस्तो हुनुपर्छ ?
कुनै अप्रत्यासित दुर्घटना नभए आगामी वेशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै छ। नयाँ वर्ष २०७४ को पहिलो उपहार आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउनु हुनेछ। यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्न लागि परेका छन्। पार्टीका उम्मेदवार छान्न कठिन होमवर्क हुँदैछ। संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ तर स्थानीय तहको अधिकार के के छ थोरैलाई मात्र थाहा छ। संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार नै थाहा नपाउँदा जनतामा शासनको पहुँच हुँदैन। फेरि कर्मचारी कै भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यसपालीको स्थानीय तहको नेता पहिलेको भन्दा विज्ञ र असल हुनुपर्छ। नेता असल भए मात्र जनतामा अधिकार पुग्छ।
स्थानीय तहमा चारवटा महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका -भुगोलमा) पोखरा साँच्चै गौरव गर्न लायक छ। ७४४ स्थानीय तहमध्ये चारवटा महानगरपालिका १३ वटा उपमहानगरपालिका, २४६ वटा नरपालिका र ४८१ गाउँपालिकामा अध्यक्ष चुनिँदै छन्। मेयरका आंकाक्षीहरुको लावालस्कर प्रशस्त देखिन्छ। उनीहरुमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने तीव्र अभिलाषा छ तर संविधाको बारेमा अनभिज्ञता छ। संविधान सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम नेकपा एमालेले केही गर्‍यो अन्य दलले आवश्यकता नै ठानेनन्।
हाम्रा मान्छे कि राम्रा मान्छे ?
देशमा बहुदल आएपछि हामी सारै दलिय भयौ। एउटा समय त यस्तो थियो काँग्रेस, कम्युनिष्ट आपसमा पानी बारबार गर्थे। दलको उम्मेदवार भनेपछि आँखा चिम्लेर भोट हाल्ने हामीले कार्यकर्ता उत्पादन गरेका छौं। आस्था र विश्वास यति बलियो छ कि आफ्नो पार्टीे भनेपछि दलका कार्यकर्ता जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तैयार हुन्छ। यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेलाई च्याप्ने प्रवृत्ति रोकिने छैन। आफ्नो दलको मान्छे आफ्नो गुटको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन भित्रभित्रै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिँदैछ। दलभित्रको गुटबन्दीका कारण राम्रा मान्छेहरु पाखा पर्दैछन्।
यस्तै गलत प्रवृत्तिका बारे करिब नौ वर्षपछि चर्चित र लोकप्रिय भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रम इन्डियन आइडलमा दर्शकहरुको मतबाट एकदमै राम्रो गायिका बाहिरिइन्। त्यस दिन निर्णायकको कुर्चीमा बसेका कवि लेखक जावेद अख्तरले दर्शकहरुसित सारै चित्त दुखाएर भने भारतीय लोकतन्त्रको बेहाल किन र कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरु मतदानको ढाँचाबाट देखिएको छ। तपाईँहरुको गुण र क्षमता हेर्र्नु हुन्न। तपाईँहरु कुनै पनि व्यक्तिलाई नाता सम्बन्ध, आफूसितको निकटता उसले बोल्ने भाषा, उसको धर्मजस्तो कुराबाट मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र उसलाई पद वा पुरस्कार दिनुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँलाई ठूलो बहादुरी गरे भन्ने लाग्दो हो। तर यसको मूल्य तपाईँका सन्ततिले चुकाउनु पर्नेछ। मान्छे छान्ने यो प्रवृत्तिले हाम्रो देशमा सबै क्षेत्रमा नराम्रोसँग जरा गाडेको छ। हामी पनि भन्छौं हाम्रो पार्टीहाम्रो जाति, हाम्रो धार्मिक समुदाय, हाम्रो मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ। भावी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले विगतदेखि भोगेको यै प्रवृत्ति निर्णायक हुन्छ पोखराको मेयरमा, हामीले यसरी नै मान्छे छान्ने छौं। हामीले छानेको मान्छे राम्रो र हाम्रो भैदिए पोखराको समग्र विकास हुने थियो।
कस्तो हुनुपर्छ मेयर
संविधानले नगरको प्रमुख र उपप्रमुख र गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको उमेरका न्यूनतम हद तोकेको छ तर अन्य योग्यता तोकेको छैन। अन्य योग्यता आम नागरिकले आफै तोकेर मतदान गर्ने हो। पोखराको भावी मेयरको पहिलो योग्यता दूरदर्शी नेतृत्व ९पष्कष्तचबचथ भिबमभच० हुनुपर्छ। नेताहरुमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुण यही हो। पोखरालाई कति वर्षमा कस्तो बनाउने हो । यस्तो योजना मेयरमा हुनै पर्छ। पोखराको यो प्राकृतिक सौर्न्दर्य ताल, हरिया डाँडाकाँडा जमिनभित्र बग्ने सेती नदी, गुफा, बनजंगल भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ पोखराको मेयरले सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्राकृतिक दोहोनलाई रोक्नु हो। यी प्राकृतिक सम्पदा छन् यो पोखरा छ। यी प्राकृतिक उपहार विना पोखरा पोखरा हुने छैन। मेयर सबै कुराको ज्ञाता हुनुपर्छ भन्ने छैन तर उसले ज्ञान हुनेसँग सल्लाह माग्न किञ्चित हिचकिचाउनु हुँदैन। हामीकहाँ नेताहरु सबै कुराको ज्ञाता बनिदिन्छन् समस्या यहीनेर छ। तसर्थ पोखराको भावी यस्तो दूरदर्शी र कल्पनाशील हुनुपर्छ कि यो महानगरलाई विदेशी पर्यटकको सबैभन्दा उत्तम गन्तव्य बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही आम्दानीले यो महानगरको समग्र विकास गरेर सुन्दर नगर निर्माण गर्न सकियोस्।
हाम्रो आचरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खुबी
हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो। अधिकारले भरिपूर्ण स्थानीय तहमा प्रशस्त आर्थिक संकलन हुने र त्यसको स्थानीय तहमा नै खर्च गर्ने अधिकार हुँदा पोखराको मात्र होइन सबै स्थानीय तहमा नै खर्च गर्ने अधिकार हुँदा पोखराको मात्र होइन सबै स्थानीय तहको मुख्य नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खुबी हुनुपर्छ। खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउन हुँदैन। समाजमा गनाएका, दीन दुःखीलाई शोषण गर्ने बहु विवाह गरेका व्यक्तिलाई पार्टीे टिकट दिन हुँदैन। यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइयो भने पार्टीको शान तल र्झछ। मनी र मसलको भरमा टिकट दिने प्रवृत्तिले जरा गाडेको हाम्रो समाजमा इमान्दार कार्यकर्ताहरु अन्यायमा परेका हुन्छन्। अहिले स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार छताछुल्ल छ तसर्थ अब स्थानीय तहमा त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन नदिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पोखराको छानो बनाउनु पर्छ।
पोखरामा छुकछुके रेल
पोखरा महानगरको विकासका लागि कल्पनाशील व्यक्तित्व आवश्यक छ। कल्पना नै गर्न नसक्ने व्यक्तिले कुनै पनि विकास गर्न सक्दैन। यो महानगर पालिकाले विकासका धेरै पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ। प्रदेश नं. ४ को निर्विवाद राजधानी पोखरालाई कल्पनाशील नेतृत्वले नमुना शहर बनाउन सक्छ। कल्पनाशील व्यक्तित्वको उदाहरणमा काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व मेयर केशव स्थापितबाट सिक्न सकिन्छ। यतिखेर उनको कल्पनाशील व्यक्तित्वले मेयरको उम्मेदवारमा राम्रै चर्चा पाएको छ। पोखराको भावी मेयर पनि उनीजस्तै कल्पनाशील हुनुपर्छ। हामीले उत्तरतिर कोरला नाँकबाट रेल भित्राएर दक्षिण नवलपरासीबाट भारतसँग जोड्न सक्छौं। अनि पोखरा महानगरपालिकाको डाँडाडाँडा कृस्ती निर्मलपोखरी पुम्दीटार हुँदै, कालिका, आर्बा, काहुँ अर्मला, पुरुञ्चौर, मौजा, सराङकोट, कास्कीकोट, भदौरेतामागी, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी हुँदै रिङरोग बनाएर सानो छुकछुके रेल गुडाउन सक्छौं। यदि रेल तत्काल सम्भव भएन भने यो पोखरा महानगरको रिङरोड बनाएर ती ठाउँमा गाडी गुडाउन सकिन्छ। डाँडैडाँडा हिमाल हेर्दै तल ताल हेर्दै चराचुरुङ्गी, वन्यजस्तु, आँखै अगाडि भेटेर यात्रा गर्नुको स्वर्गीय आनन्द यही महानगर पालिकाले दिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो पोखरालाई राम्रो पोखरा बनाउन इमान्दार, सक्षम, योग्य र दूरदर्शी मेयर रोजौं।